Drone metal - ဝီကီပီးဒီးယား
Drone, experimental, doom metal, heavy metal, post-minimalism, dark ambient, noise, industrial
၁၉၉၀ ခုနှစ်များ အစောပိုင်း၊ ဆီအက်တယ်မြို့၊ ဝါရှင်တန်
Experimental metal • post-metal
Drone metalကို drone doom နှင့် power ambient ဟုသိကြပြီး heavy metal၏ ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး slow tempo၊ long-duration tone များနှင့် ရောစပ်ထားသည်။ drone metal သည် တစ်ခါတစ်ရံ post-metal နှင့် experimental metal နှင့်ဆက်နွယ်နေသည်။
၂ ဂီတဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးမှု
၃.၁ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များ
၃.၂ ၂၀၀၀ ခုနှစ်များ
ပုံမှန်အားဖြင့် လျှပ်စစ်ဂစ်တာကို ကြီးမားသော reverb နှင့် audio feedbackများနှင့် အဆိုမှာ မာန်ဖီသံ(သို့) စူးရှသောအသံများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြသည်။ သီချင်းများမှာ lack beat (သို့) rhythm in the traditional sense နှင့် အရည်အသွေးမှာ ကြာမြင့်သည်။ အမေရိကန် drone metal သည် sound sculpture နှင့်အတူ drone metal တီထွင်သည့် တီးဝိုင်းဟု ဖော်ပြခံရသည်။ Jan Tumlir က infra-sound rumble of sub-bass ကိုအကျိုးပြုပါတယ်။ ဒါကို brown noise ဟုခေါ်ပါသည်။
drone metalသည် အမျိုးများပြားစွာ လွှမ်းမိုးမှုမှ အစိတ်အပိုင်းများကို ရောနှောထားသည် black Sabbath, sleep နှင့် swans၊ ကနေဒါအဆိုတော် သီချင်းရေးဆရာ Neil Young၊ American အဆိုတော် သီချင်းရေးဆရာနှင့် Sonic Youth တီးဝိုင်းမှ ဂီတာသမား Thurston Moore တို့၏ feedback-heavy guitar tone များ၊ တေးရေးဆရာအနည်းစုမှာ Phill Niblock၊ Charlemagne Palestine၊ La Monte Young နှင့် Tony Conrad တို့ပါဝင်သည်။
Drone metal သည် ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်၊ ဆီအက်တယ်မြို့မှ Earth အုပ်စုမှ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Earth သည် Melvins တီးဝိုင်းမှ sludge metal နှင့် La Monte Young ၏ minimalist ဂီတမှ စိတ်ကူးညဏ်များကို ယူခဲ့သည်။ အခြားအုပ်စုမှာ Burning Witch ဖြစ်ပြီး Earth တည်ထောင်ပြီး ငါးနှစ်အကြာတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Seattle မှဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျမဟုတ်သော အဆိုပုံစံနှင့် audio-feedback တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ထိုအုပ်စုသည် အရေးပါသော powerviolence (hardcore punk ၏အမျိုးအစား) ကို label Slap-a-Ham တွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ သည်။ O’ Mally ၏ နောက်ပိုင်းအုပ်စု Sunn O))) သည် Earth ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မျက်မှောက်ခေတ် အရေးပါသော drone metal ပုံစံအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ Godflesh (british industrial metal) တီးဝိုင်းသည်လည်း အခြားအုပ်စုများကို လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ တိုကျိုမှ Boris (Japanese experimental metal) သည် drone metal ကို ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေခဲ့သည်။ Seattle အုပ်စုနှင့် ပြိုင်လျက်ရှိသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် စပိန်တီးဝိုင်း Drone Sphere သည် self-titled cassette နှင့်အတူ drone metal ပုံစံထဲသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။
Nadja (တိုရန်တို)၊ Jesus (ယူကေ)၊ Black Boned Angel (ဝယ်လင်တန်၊ နယူးဇီလန်)၊ Khanate (နယူးယောက်စီးတီး)၊ KTL (ဝါရှင်တန်/လန်ဒန်)၊ Ascend and Eagle Twin (USA)၊ Teeth of Lions Rule the Divine (နော်တင်ဟမ်၊ အင်္ဂလန်) နှင့် Moss (ဆောက်သမ်တန်၊ အင်္ဂလန်) များသည် အရေးပါသော drone metal အုပ်စုတို့ဖြစ်ပြီး ၂၁ ရာစု အစောပိုင်းတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Rhys Chatham ၏ essentialist project သည် drone metal ကိုအထောက်အကူပြုရန် အကြောင်းအချက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Brandon Stosuy, "Heavy Metal: It's Alive and Flourishing", Slate, August 19, 2005.  Access date: August 22, 2008.
↑ Jon Caramanica, "The Alchemy of Art World Heavy Metal". International Herald Tribune, September 20, 2005.  Archived 27 September 2005 at the Wayback Machine. Access date: August 25, 2008.
↑ ၄.၀ ၄.၁ Steve Smith, "Where Classic Avant-Garde GetsaHint of Heavy Metal", New York Times, September 13, 2006.  Access date: August 28, 2008.
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ John Wray, "Heady Metal", New York Times, May 28, 2006.  Access date: August 18, 2008.
↑ ၇.၀ ၇.၁ Jan Tumlir, "Primal dirge", Artforum, April 2006.  Access date: August 22, 2008.
↑ Oliver Spall, "Sunn O))) and Boris present Altar", Flavorpill, December 10, 2007.  Archived 8 December 2008 at the Wayback Machine. Access date: August 22, 2008.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Drone_metal&oldid=727595" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။